ढाई बर्षको बैदेशिक अनुभबलाई बटुलेर बैतडीका २४ बर्षीय युवाले सञ्चालन गरे चप्पल उद्योग ! | सुदुरपश्चिम खबर
ढाई बर्षको बैदेशिक अनुभबलाई बटुलेर बैतडीका २४ बर्षीय युवाले सञ्चालन गरे चप्पल उद्योग !
बैतडी– बैतडीमा चप्पल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ८ रागांजुझौनामा राकेश चप्पल उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । सोही ठाउँका स्थानिय २४ बर्षीय हरिश महराले चप्पल उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन ।
ढाई बर्षसम्म खाडी मुलुक कतारमा पसिना बगाएका महराले ‘गरे के हुदैन ? ’ भन्ने कुरालाई ब्यबहारमा बदल्दै गाउँमै चप्पल उद्योग सञ्चालन गरेका हुन । “अर्काको देशमा गएर कति पसिना बगाउनु ? , मिहेनत गरे यही माटोमा सुन फल्छ भन्छन त्यसैले आफ्नै ठाउँमा चप्पल उद्योग सञ्चालन गरेको हुँ ” महराले भन्नुभयो ।
कतारमा ग्राफिक डिजाईनरको काम सिकेका उनले झण्डै ६ लाखको लगानीमा मेसिन खरिद गरी चप्पल उत्पादन गरिरहेका छन ।
चप्पलका लागी आबश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ भने उनले भारत तथा नेपालकै बिभिन्न चप्पल उत्पादक कम्पनीहरुबाट ल्याउने गरेका छन ।
अहिले दैनिक २ सय देखि ३ सय जोर सम्म चप्पल उत्पादन गरिरहेको सञ्चालक महराले बताएका छन । उत्पादीत चप्पलहरु स्थानिय बजारदेखि लिएर धनगढी, महेन्द्रनगरसम्म पठाउने गरिएको छ ।
स्थानिय बजारहरुका लागी बाहिरबाट आउने चप्पलहरु भन्दा यही उत्पादन गरिएको चप्पल सस्तो पर्ने गरेको छ । चप्पल उद्योगमा महरासंगै अन्य ३ जनाले पनी रोजगारी पाएका छन । महराले उद्योग बिस्तार गर्दै अगरबत्ती र एलईडि बल्ब समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन ।
नेशनल लाईफ ईन्स्याेरेन्स कम्पनी ३४ औ बर्षमा प्रवेश !
चुरे जैविकमार्ग बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पहिलो सेवा केन्द्र लालपुरमा !
घोषणाको २५ वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे, दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास शिलान्यास !
बेदकोट सामुदायिक वनको १५ औँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
नक्कली नोट बनाउने सामानसहित कञ्चनपुरमा दुई पक्राउ